ဝါးခယ်မ : RED WAVES ကျေးဇူးတင်လွှာ (၂၀၁၃ - မေ- ၂၅ )
Myanmar Online Teashop ၏ နှစ်နှစ်ပြည်. အထိမ်းအမှတ် အလှု သို. ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင်.ရရှိခြင်းအတွက် RED WAVES မှ ကျေးဇူးတင်လွှာ
Myanmar Online Teashop ၏ နှစ်နှစ်ပြည်. အထိမ်းအမှတ် အလှုအဖြစ် Forum တာဝန်ရှိသူတို.က မြောက်ဒဂုံ ရှိ သုခရိပ်မြုံ လူငယ်ဖွံ.ဖြိုးရေး ပရဟိတ ဂေဟာ သို. ဆန်..ဆီ..ဆေးဝါး..မုန်. ...တစ်နေ.စာ ကုန်ကျစရိတ်..ထာဝရပဒေသာပင်..ကျောပိုးအိတ်..မိုးကာ..ကျောင်းစိမ်း စသည်တို. ခန်.မှန်းတန်ဘိုး (၁၂သိန်းခန်.)အား ကဆုန်လပြည်.နေ. (၂၄-၅-၂၀၁၃) နေ.ကသွားရောက်လှုဒါန်းခဲ့ပြီး ကလေးငယ်များ စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ ပျော်ရွှင်အောင် ပုံပြောခြင်း ..ကခုန်ခြင်း စသည်တို.ဖြင်.ပါ တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုအလှုသို. RED WAVES Member များနှင်. Ayeyawady United FC (လူကြီး/လူငယ်) ကစားသမားများပါ ပူးပေါင်းလှုဒါန်းခွင်.ရရှိခဲ့ပါသည်။
ထို.အပြင် အခမ်းအနားတွင်လည်း RED WAVES Fan Club အကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခွင်.ရစေခဲ့သလို Fan Club ကိုယ်စား EC တစ်ဦး ၊ Ayeyawady United FC 's Player များကိုယ်စား ကစားသမားတစ်ဦးတို.အား ဂေဟာ တာဝန်ရှိသူများထံ လှုဒါန်းပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခွင်.ပြုစေခြင်း ၊ အထိမ်းအမှတ် ကိတ်မုန်.ခွဲဝေရာတွင်လည်း Ayeyawady United FC 's Player များ ကို Forum Member များနှင်.အတူ နေရာပေး ခွဲဝေစေခြင်း စသည်တို.အတွက် RED WAVES Fan Club အနေဖြင်. (အထူး) ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
အခမ်းအနားသို. တက်ရောက်လာပေးသော Ayeyawady United FC အုပ်ချုပ်သူ ဦးဇော်မြင်. အပါအ၀င် RED WAVES Fan Club Member များ Ayeyawady United FC 's Player များ အားဂရုစိုက် ဧည်.ခံပေးခဲ့ခြင်းများ နွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံပေးခဲ့ခြင်းများအတွက်လည်း အသိအမှတ်ပြု ကျေနပ်ရပါသည်။
Myanmar Online Teashop အနေဖြင်.လည်း အစစအရာရာ ပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးလျှင်နှစ်များကြည်ရှည်စွာ ရပ်တည်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည် ။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 10:59 AM